Buyela kwiSizzle: Indlela abaThengisi be-E-Commerce abanokusebenzisa ngayo i-Creative ukunyusa imbuyekezo | Martech Zone
Uhlaziyo lwabucala lwe-Apple lutshintshe ngokusisiseko indlela abathengisi be-e-commerce benza ngayo imisebenzi yabo. Kwiinyanga ukususela oko uhlaziyo lukhutshiwe, kuphela ipesenti encinci yabasebenzisi be-iOS abaye bakhetha ukulandela umkhondo wentengiso.
Ngokohlaziyo lwamva nje lukaJuni, ezinye iipesenti ezingama-26 zabasebenzisi behlabathi jikelele bavumele ii-apps ukuba zibalandelele kwizixhobo ze-Apple. Eli nani belisezantsi kakhulu e-US nge-16% kuphela.
Ngaphandle kwemvume ecacileyo yokulandelela umsebenzi wabasebenzisi kwiindawo zedijithali, ezininzi zezicwangciso zephulo abathengisi abaye bathembela kuzo azisenakwenzeka. Abathengisi be-e-commerce baya kuba nexesha elinzima kakhulu njengoko ubuchule bokuyila ababufumeneyo ukukhumbuza abasebenzisi ngeemveliso abazijongileyo okanye abazishiye ngasemva kwiinqwelo zabo ziye zathotywa kanobom.
Izicwangciso ezizanyiweyo neziyinyani zokulandela umkhondo aziyi kuwela ecaleni ngokupheleleyo, kodwa ziya kutshintsha kakhulu. Ixabiso letrafikhi livumela ukukwazi ukunciphisa umkhondo wentengiso (LAT) iyakhula kwihlabathi le-post-14.5, kwaye iziphumo eziphuculweyo abazivelisayo ngokuhambelana ne-LAT traffic zikhuthaza abathengisi ukuba babhide kakhulu kunokuba bebesenza ngaphambili. Ukuze uthathe ithuba kwezi kunye nezinye iindlela, abathengisi be-e-commerce kuya kufuneka batshintshe indlela yabo yokuyila intengiso. Nazi ezinye zeendlela eziphambili zokuyila ziya kuhlala zisisixhobo esibalulekileyo sokuphumelela kwe-e-commerce, kunye neengcebiso kubathengisi abajonge ukonyusa imbuyekezo yabo kwinkcitho yentengiso njengoko olu tshintsho luqala ukusebenza.
Ukunqongophala kwedatha yomsebenzisi kufuna ukuyila kunye nesibheno esibanzi
Uyilo oluhle kunye nolwasekuqaleni luya kunceda iibhrendi zizahlule ngaphakathi kwendawo yentengiso exineneyo, nangaphandle kokusetyenziswa kwezixhobo zokujolisa. Ngelixa uzama ukufikelela ngakumbi, amashishini ahlala ebhenela kwiintengiso ze-drab kunye nezegeneric. Kodwa ukuphosa umnatha obanzi akuthethi ukuba uyilo lokutsala. Ukuba awukwazi ukuxhomekeka ekufikeleleni kumntu othile, ukuyila kwakho kufuneka kungabi nakuphikiswa kubantu abaninzi ngaxeshanye. Abakhangisi abatyala imali kubuchule obukhethekileyo baya kuba nexesha elilula lokuthatha ingqalelo kunye nokufumana abathengi abatsha kweyona ndawo ibanzi yentsimbi.
Uyilo lwentengiso lukwanika ithuba lokunxibelelana nobuntu bophawu lwakho kwihlabathi. Kwiimpawu ezininzi, oko kuya kuthetha ukudibanisa izinto ezibonwayo ezinomyalezo onamandla. Ukungabikho kwedatha yenqanaba lomsebenzisi kwenza ukuba kubaluleke ngakumbi kubathengisi ukuba banikeze ubuchule obunempembelelo, besebenzisa ilizwi elicacileyo lokuthengisa ukuhambisa amava abathengi akhumbulekayo. Abakhangisi kufuneka bagxile kwimiyalezo edibanisa ixabiso lebrendi kubomi babathengi. Thatha ukuba nabani na obona uyilo lwakho lwentengiso ufumana ibhrendi yakho okokuqala; kufuneka azi ntoni loo mthengi ngenkampani yakho? Lungelelanisa ngokucacileyo, imiyalezo enamandla kunye neendlela ezivuselelayo zokubalisa ukwenza umbono ongapheliyo. Njengoko intetho yakudala yokuthengisa ihamba: musa ukuthengisa inyama yenkomo, thengisa i-sizzle.
Throttle up organic imizamo ukudibanisa nabathengi apho bakhoyo
Abathengi banamhlanje balindele ukukwazi ukunxibelelana ngokusebenzayo kunye nokuncokola neempawu malunga nokuba yintoni ebalulekileyo kubo. Ukuyila okusebenzayo kuvumela iibrendi ukuba zinike olo hlobo lwamava encoko ngokusebenzisa amaqhinga endalo afana nemidiya yoluntu. Umzekelo, amaqonga eendaba ezentlalo amaninzi anika abasebenzisi ithuba lokuvolontiya idatha ethile yabantu ukunceda ukuphucula amava abo. Ukunxibelelana nabathengi apho sele beqokelelene khona akukho-brainer, kwaye amaqonga abhakiweyo kwizakhono ezisisiseko zokujolisa anceda ukubuyisela ezinye zezinto ezicacileyo ezilahlekileyo ngaphandle kokulandela umkhondo wentengiso. Abathengi nabo baxhotyiswe ngakumbi kunanini na ngaphambili ukuba bavote ngezipaji zabo, ngoko ke abathengisi kufuneka babethelele ubuchule babo - kunye neencoko ezibakhuthazayo - ngembono kunye nemvakalelo yexabiso lenkampani.
Faka esikhundleni iingcebiso ezifanelekileyo ngeemveliso ezidumileyo
Amanyathelo amatsha abucala e-Apple aya kuphelisa ukwenza iingcebiso ezithile zemveliso ngokusekelwe kwindlela yokuziphatha yabathengi yangaphambili kuye nabani na oyekisa ukulandelwa. Endaweni yeemveliso ezifanayo, abakhangisi kufuneka bagxile kwizinto ezidumileyo. Uyilo lwentengiso oluqaqambisa iimveliso ezithengiswa kakhulu lwenza utyalo-mali olulumkileyo kuba luveza abathengi abalindelekileyo kunye nabakhoyo kwizinto osele uzazi ukuhambisa inaliti yeshishini lakho.
Ingqondo yomhlambi inika abathengi ukuzithemba kwiimpawu ezintsha kwaye ibenze bathenge iimveliso ezithandwayo ngoontanga babo. Yiyo loo nto ukubonisa abathengisi abagqwesileyo kuyilo lwakho lwentengiso yindlela elungileyo yokunyusa intembeko kunye nokukhokela abathengi abatsha ngefenitshala yokuthengisa, nangaphandle kwamanqaku edatha anzulu malunga nokuba bangoobani kwaye yintoni abayikhathaleleyo.
Gxininisa izahlulo eziphambili kunye neempawu ezizodwa zemveliso
Iimveliso zinokuphatha ukungabikho kolwazi oluneenkcukacha malunga nabathengi abaza kuba lithuba lokuqaqambisa izahlulo eziphambili ezenza iimveliso zabo zikhethekileyo. Ukuhlalutya idatha yokuthengisa kuya kunceda iimpawu zichonge ukuba yintoni eyenza iimveliso zabo zikhunjulwe. Emva koko ungaphuhlisa uyilo olukhuthaza ezo zinto, njengeemveliso ezibaleka ngokwenyani ukuya kubukhulu, ikhonkco lobonelelo oluzinzileyo, okanye ukusetyenziswa kwemathiriyeli ephinda isetyenziswe.
Ukumamela abathengi bakho malunga nokuba yintoni ehambelana nabo kwakhona sisicwangciso esiluncedo; Uphononongo lwabathengi bam kunye nokuzibandakanya kwimithombo yeendaba zentlalo ukuze ufumane ulwazi olukhethekileyo kwinto abayithandayo abathengi malunga nebhrendi yakho kwaye baphuhlise ubuchule obubhiyozela ezo mpawu. Kwaye ungoyiki ukungqiyama kumanqaku okwahlula akhuthaze abathengi abadlulileyo ukuba bathembeke ngokwenyani, nokuba bebengalindelekanga kangakanani.
Uyilo luya kuba lulungelelaniswe kancinci kwaye lungacaciswanga kangako kwihlabathi lasemva kwe-14.5. Kodwa ngakumbi njengoko i-ad yokungena kwi-ad tracking rates kunye nokwanda kokwamkelwa kokwamkelwa kwe-iOS 14.6 nangaphaya, ukuyila kuya kuba sisixhobo esibalulekileyo kubathengisi abajonge ukunxibelelana nabathengi abatsha kunye nokuphumelela kubaphulaphuli abangaziwayo. Njengazo zonke iinguqulelo zetekhnoloji, indaleko yindlela eya phambili. Ukuze abathengisi baphumelele, kuya kufuneka balungelelanise kwaye baguqule ukuqonda kwabo kokuyila kunye nosetyenziso olunamandla.
tags: apple privacykcreativeeCommerceabathengisi be-ecommerceintengiso ye-ecommerceiOSI-traffic ye-LATbuyela kwintengisobuyela kubuchule